मोदीकी पत्नी बन्न आफू योग्य रहेको राखी शावन्तको दाबी !
मुम्बई । बलिउड आइटम गर्ल राखी शावन्त चर्चाकै लागि विभिन्न फण्डा अपनाउन माहिर छिन् । यिनै राखी पुन एक पटक आफ्नो अभिव्यक्तिको कारण मिडियामा छाएकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रसंशक रहेकी राखीले आफू मोदीको श्रीमती बन्न चाहेको बताएकी…
टाउको नुहाउने गजबको काइदा (भिडियो)
नुहाउने यो तरिका सायद यस अगाडि देख्नु भएको थिएन होला। यो दृश्य चीनको हो। चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले आफ्नो ट्विटरमा राखेको यो भिडियो हेर्दा रोचक लाग्छ। Try washing your hair with no #shower? This man shows you how pic.twitter.com/nwNr5EW5Jh…
प्रहरी ‘घेरा भित्रबाट’ तस्बिर सार्वजनिक गर्दै बाबुरामले गरे प्रचण्डप्रति व्यंग्य
[related] काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो आफ्नो पाँचौं गिरफ्तारी भएको बताएका छन्। उनले पाँचौं पटकको गिरफ्तारीमा ‘गणतान्त्रिक प्रचण्ड सरकार’प्रति अप्रत्यक्ष व्यंग्य तेर्साएका छन्। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका नेताहरूसहितको तस्बिर फेसबुकमा पोष्ट गर्दै बाबुरामले महाराजडंजस्थित…
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्दा नेताले देखाएको ‘सेल्फी चर्तिकला’ (फोटो/भिडियो)
काठमाडाैं । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा रहेको त्रुटी सच्याउनका लागि दवाव दिन नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ६२ दलका प्रतिनिधि वालुवाटार पुगेका थिए। दिन थियो चैत १७ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका दलमध्ये अधिकांश साना…
चावहिलको हिलाम्य सडकमा मोटरसाइकल चिप्लियो (फोटो)
काठमाडाैं । घाम लागे धुलाम्य हुन्छन् काठमाडाैंका सडक, पानी परे हिलाम्य। मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सडक विभागले सडक भत्काएर निर्माणको काम गरिरहेका कारण सडक निकै रूग्ण छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिच्छ्याउनका लागि खनेको सडकमा यात्रुले दैनिक हैरानी खेप्ने गरेका…
‹ First Newer 13 14 15